Ireo mpahay siansa ireo izay mamadika plastika ho menaka maloto - Afrikhepri Fondation
sabotsy 10 aprily 2021
Ienin-taona lasa izay, ny tanora amerikana SME Agilyx nanao paikady teknika hanodinana plastika rehetra hanamboarana menaka crude tena tsara. Famoronana iray izay mety hamadika ny fanotofana tany ho lasa fametrahana volamena mainty vaovao, araka ny filazany ny Goodplanet Foundation.
Ity haitao vaovao ity dia efa naharesy lahatra ireo mpanamboatra sy ozinina maro eo an-dalam-panamboarana any Etazonia. Ny orinasa 60 olona dia nahavita nampifandray ilay goavambe solika frantsay Total sy ny renivohiny, ary koa ny laharana amerikana 1 ho fako. efitra Management.
Raha ny fahaiza-manaony, ny menaka solitany novokarina dia tsy tokony hialona an'io izay nanjary nanerantany. Goodplanet mamintina ny fizotrany: “Voaporitra aloha, hoy ny plastika dia apetraka ao anaty‘ cartridge ’lehibe iray, hafanaina hovana etona, avy eo ampangatsiahina amin'ny rano. Ny solika avy eo dia misaraka amin'ny fiakarana amin'ny tany. Maherin'ny 75% ny lanjan'ny fanombohana dia navadika ho menaka manitra sentetika, vonona hodiovina toy ny volamena mainty saodiana na rosiana. Ny ambiny dia mizara ho lasantsy sy fako farany (latsaky ny 10%). "
Jon Angin, filoha lefitry ny Agilyx, dia nanazava hoe:
"Ny mahaliana antsika dia tsy ny plastika novolavolaina ankehitriny, fa ny plastika izay tsy tadiavin'ny olon-kafa ary miafara any amin'ny fanariam-pako matetika"
Manizingizina ny injeniera amin'ireo prospect nosokafan'ny teknolojiny ho an'ny kaontinanta taloha:
"Raha dingana iray alohan'i Amerika amin'ny resaka fanodinana entana, i Eoropa koa dia manana toerana malalaka kely kokoa hatokana ho an'ny fanariam-pako noho ny Etazonia na Kanada"
Orinasa japoney iray no namorona milina manova kitapo plastika ho menaka maloto.
Ahoana? 'Sa' Inona? Amin'ny alàlan'ny famadihana ny dingana. Satria raha mahavita kitapo ny solika… azo atao koa ny mifanohitra amin'izay. Afa-tsy izany ...
... Ny noforonin'i Monsieur Akinori Ito avy any an-trano Orinasa tsara indrindra , afaka mamadika plastika 1 kg ho menaka 1 litatra amin'ny fomba madio kokoa.
Ny dingana dia manafana ny plastika amin'ny toerana voaisy tombo-kase tanteraka. Ny etona dia voafandrika amin'ny alàlan'ny tambajotra misy fantsona sy efi-drano. Avy eo, misy ny fampangatsiahana ny etona. Ny fampangatsiahana izay manalefaka ny etona ho lasa menaka maloto. Ity menaka manitra ity dia azo ampiasaina amin'ny mpamokatra herinaratra ary koa fatana sasany. Ny dingana fanatsarana fanampiny dia afaka manova solika solika ho lasa lasantsy.
Tsara kokoa! Ny rafiny dia tsy natokana ho an'ny mpanamboatra irery, fa azon'ny isam-batan'olona atao ihany koa.
Safidy fanadihadiana hita maso (Playlist)
Ovaho ny eritreritrao, ovaovy ny fiainanao - Wayne Dyer (Audio)
Ny helok'ireo firenena Arabo-Silamo manoloana an'i Afrika
Hijery ny The Dark Tower (2017)